Chii chinonzi Bitcoin? | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Bitcoin iri mari yemadigital inogona kuchinjaniswa nemagetsi. Bitcoin hazvipo sechinhu chinoonekwa.
Iyo inogadzirwa uye inoteedzerwa netiweki yemakomputa ichishandisa yakaoma masvomhu mafomula, pane kuita nemutumbi mumwe kana sangano
Iko chaiko, asi kwete "chaiyo" mari. Sei?
Hapana munhu ari shure kweBitcoin.
Bitcoin haina kupihwa nehurumende yepakati agency. Semuenzaniso, kana iwe uine 10 euro banknote, iyo hombe banki inovimbisa iwe kodzero yekubhadhara nemari iyoyo chero kupi munzvimbo yeyuro.
Nekudaro, hapana munhu anovimbisa kodzero yako yekushandisa bitcoins uye haatsvage kuchengetedza kudzikama kwekukosha kwavo.
Bitcoin haisi iyo inowanzo gamuchirwa fomu yekubhadhara.
Dai Bitcoin yaive mari, iwe waigona kuishandisa munzvimbo zhinji. Asi kutaura zvazviri, kune nzvimbo shoma kwazvo kwaunogona kubhadhara nema bitcoins. Uye pazvinokwanisika, kutengeserana kunononoka uye kunodhura.
Kunyangwe mu2020 yakagamuchirwa senzira yekubhadhara neiyo Pay Pal system, iyo chikamu chakakonzera kukura kweiyo bitcoin mwero kubva muzhizha ra2020. Izvo zvakaita kuti zvive nyore uye zvakachipa pakutengesa, asi panguva imwe chete, zvichitsvaga.
Vashandisi havana kudzivirirwa.
Hackers vanogona kuba bitcoins. Kana izvi zvikaitika, hauna mushonga wepamutemo.
Bitcoin yakanyanyisa kugadzikana.
Mari inofanirwa kuve chitoro chakavimbika chemutengo kuitira kuti uve nechokwadi chekuti unogona kutenga nezvenhamba yakaenzana yezvinhu nemari yako nhasi sezvawaizoita mangwana kana kutenderera nguva yakafanana gore rinouya. Bitcoin haina kugadzikana. Izvo zvinoitika kuti mumazuva mashoma kukosha kwayo kunokwira nekudonha zvakanyanya.
Asi kana Bitcoin isiri mari, saka chii icho?
Bitcoin inofungidzira mune zvakasikwa. Mune mamwe mazwi, Bitcoin chinhu chaunogona kubheja kuti uwane purofiti, asi panjodzi yekurasa kurasikirwa kwako.
Central Bank iri kurambidza bitcoin?
Haisi basa reCentral Bank kurambidza bitcoins kana zvimwe zvinonzi cryptocurrencies. Nekudaro, kupihwa kushomeka kwekudzivirira kwevatengi, zvakakosha kuti uchenjere.
Mibvunzo ye57 mu database yakagadzirwa mu 0,426 masekondi.